Vavaky ny ady ara-panahy amin'ny fanasitranana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaky ny ady ara-panahy amin'ny fanasitranana
Vavaky ny ady ara-panahy amin'ny fanasitranana
Andao hiatrika vavaka ara-panahy ho an'ny fanasitranana anio. Ny zavatra iray tsy maintsy takatsika dia ny vavaka ady ara-panahy dia natao ho an'ireo zavatra izay tsy te hitranga mora foana. Ohatra, ireo vavaka ady ara-panahy ho an'ny fanasitranana ireo dia natao ho an'ny olona iray izay narary, ary toa tsy ho avy ny fanasitranana.
Betsaka ny marary izay voatahiry tsy ho azon'ny devoly ny fanasitranana azy. Ny maro tamin'izy ireo dia fehezin'ny devoly, ary na inona na inona ataony, dia tsy ho salama. Matetika ny zavatra heverintsika fa tsy azo sitrana dia aretina fotsiny natsangan'ny tanan'ny devoly.
Ny vavaka dia fantsom-pifandraisana eo anelanelan'ny mety maty sy ny tsy maty. Manorina fifandraisana misy eo amin'ny lehilahy sy ny tontolon'ny fanahy izy io. Ary tsy maintsy mahatakatra ianao fa ny ara-panahy dia mifehy ny ara-batana. Noho izany, raha misy fihenjanana any amin'ireo asantsika amin'ny ara-batana, dia tokony hahatsapa isika fa nisy zavatra natao teo amin'ny sehatry ny fanahy. Rehefa ny aretina iray dia manohitra ny fikarakarana ara-pitsaboana rehetra izay nomena, dia izao no fotoana tokony hidirany amin'ny karazana ady ara-panahy hanafaka ny marary amin'ny fihazonana haizina.
Ny fangatahana ady ara-panahy amin'ny fanasitranana dia manavotra ny olona amin'ny fahafatesana amin'ny aretina tampoka. Misy foana ny vahaolana ho an'ireo aretina sy aretina rehetra any amin'ny sehatra fanahy. Milaza ny soratra masina hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao Batisa, ny fanjakan'Andriamanitra dia voan'ny herisetra, ary ny herisetra no maka azy. Manazava izany fa ny fanaovana zavatra manokana vita dia mitaky herisetra ara-panahy.
Misy fanasitranana mahagaga izay tsy ho mora raha tsy amin'ny alàlan'ny vavaka ady.
Raha tsapanao fa mila ianao na misy olona akaiky anao mila an'io karazana vavaka io dia nanangona ny lisitr'izy ireo izahay hampiasainao. Tsarovy fa nilaza i Jesosy fa tsy hitranga izany raha tsy amin'ny Fifadian-kanina sy ny vavaka. Azonao atao ny manandrana miditra amin'ny fifadian-kanina rehefa miteny an'ireto vavaka ireto ianao.
Ry Jesosy Tompo ô, manafaka ny tenako amin'ny fanandevozana demonia rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ambarako ny fahafahako amin'ny gadra rehetra izay nampiasaina mba hamatorana ahy, avy amin'ny tady demony rehetra izay efa nampiasaina mba hitazona ahy tamina toerana iray, dia esoriko anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Satria ny dian-tsika no ahasitranana antsika. Izaho dia manapa-kevitra amin'ny fahefan'ny lanitra fa ny fahasitranako dia azo antoka amin'ny anaran'i Jesosy na inona na inona misakana izay mety te hijoro ho toy ny vato mahatafintohina dia ravan'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Manohitra ny fanapahana aho izay mety te hanitatra ny andro fandreseko amin'ny aretina, dia mandringana azy amin'ny ran'ny zanak'ondry aho. Fa ny ra nalatsak'i Kristy dia efa avy nanohitra ny fanekena ratsy rehetra misy aretina tsy azo sitrana amin'ny fiainako, rava ny anaran'i Jesosy aho.
Mitsangàna Tompo, ka aelezo ny fahavalonao. Ny lehilahy sy vehivavy rehetra izay mijoro eo amin'ny fantson'ny fahasitranako, izay rehetra mijoro ho goavambe manohitra ny fandreseko amin'ity aretina ity, ilazako ny fahafatesan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Namoaka didy tamin'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny anjelin'ny fahafatesana izay nitsidika ny tany Ejipta ary namono ny voaloham-bokatry ny Ejipsianina dia handeha ho any an-tranon'ny fahavaloko ary hamono azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa i Kristy nokapohina noho ny amiko, notaomina noho ny amiko, niaritra fanaintainana sy fijaliana noho ny amiko, mba hahazoako fiainana milamina. Midira ao amin'ny fanekena natao tamin'ny ran'i Kristy tany Kalvary aho ary manapa-kevitra fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy aho. Horavako ny trano mimanda rehetra ao amin'ny maizina; ny rahona matevina rehetra manemitra ahy, dia aringako amin'ny afon'Andriamanitra Tsitoha ao amin'ny afon'i Jesosy.
Ny hery rehetra sy ny faneken'ny razambe miasa manohitra ny fahasalamako. Ny hery demony rehetra izay nokapohina hamono ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviako izay misy aretina tsy azo sitranina, tonga mamely anao anio aho ary manimba ny herinao amiko amin'ny ran'i Kristy. Fa voasoratra, dia naharesy azy izy noho ny ran'ny zanak'ondry sy ny teny vavolombelony. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahako.
Ny aretina ara-piarahamonina rehetra izay misy fiatraikany amin'ny olona monina eo amin'ny fiarahamonina misy ahy dia miala amiko amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ianareo devoly sy mpandraharaha marary tsy azo sitranina, henoy ny feon'ny Tompo, satria i Kristy no nitondra ny aretiko rehetra teo aminy ary nahasitrana ny aretiko rehetra Izy. Manome didy amin'ny anaran'i Jesosy aho fa salama tanteraka, manambara ny fahafahako avy aminao amin'ny anaran'ilay Masin'Inreal.
Izay goavan'ny demoniaka rehetra izay nanao fianianana fa tsy ho sitrana intsony aho, miantso ny Liona ao amin'ny fokon'i Joda aho handany anao sy ny mpikambanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Nopotehiko ny tamba-jotrao rehetra momba ahy, noravako avokoa ny tobinao rehetra, ary hosoloiko ireo kerobima be voninahitra ianao sy ny demonianao. Ary manapa-kevitra aho fa ny Seraphim miaraka amin'ny sabatry ny lelafo no handeha eo alohako ary handringana ny fanafihana rehetra efa natsangan'ny fahavalo hampahory ahy indray.
Fa voasoratra fa ny Zanaka efa navotsotra dia afaka tokoa. Manapa-kevitra aho fa ny fijoroako ho vavolombelona momba ny fahafahana, ny fijoroako ho vavolombelona momba ny fahafahana, ny fijoroako ho vavolombelona momba ny fanasitranana dia ho maharitra amin'ny anaran'i Jesosy.
Raha misy lehilahy na vehivavy te-hamerina mijery ity raharaha ity sy hampisy ity aretina ity, dia ho tonga amin'ny zanany voalohany ary hatramin'ny farany ilay olona toy izany. Ary raha maharitra izy ireo dia hanao sorona ny tenany manokana amin'ny anaran'i Jesosy.
Apetrako ho anjelin'ny Tompo ny andraikiko, ary hanomboka hitarika ny lalako manomboka anio izy ireo. Fa voasoratra fa ny afo mialoha ny kalesin'i Jehovah ka handevona ny fahavalon'i Jehovah. Ny fahavaloko rehetra dia haringana amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Previous lahatsoratraIreo vavaka ao amin'ny Baiboly dia misy andininy ao amin'ny Baiboly
Next lahatsoratraVavaky ny ady ara-panahy ho an'ny fianakaviana
Vavaky ny alina amin'ny fanoherana ny fanahy hafahafa Fizarana 2
Aprily 26, 2019
Ny vavaka dia manondro ny fampiasana ny ràn'i Jesosy ho fiadiana
Vavaka ady mba handravana ny drafitry ny fahavalo
Septambra 19, 2020
Vavaka hanoherana ny fanafihana ara-panahy
Janoary 16, 2019